थाहा खबर: के बाबुराम भट्टराई 'ओलीको राष्ट्रवाद' सँग डराएका हुन्? पढ्नुस् अन्तर्वार्ता
के बाबुराम भट्टराई 'ओलीको राष्ट्रवाद' सँग डराएका हुन्? पढ्नुस् अन्तर्वार्ता
भूतपूर्व प्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई अहिलेको राजनीतिमा धेरै गाली खाने र आलोचना गरिने नेतामध्येमा पर्छन्। सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न मञ्चहरुमा उनको आलोचना भइरहन्छ। त्यो आलोचना संविधानसभाले संविधान जारी गरेको दिनदेखि नै सुरु भएको हो। तर भट्टराई टसको मस छैनन् बरु एउटा ध्रुवमा उभिएर आफ्नो धारणा राखिरहेका छन्।
भट्टराईले केही समयअघि अमेरिकामा ट्रम्जपस्तै नेपालमा ओलीवादको खतरा हावी रहेको भनेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आलोचना गरेका थिए। देश राष्ट्रियताको मुद्दामा ओलीको नेतत्वमा ध्रुवीकृत भइरहेका बेला भट्टराईले किन 'एन्टी करेन्ट' राजनीति गरिरहेका छन्? के उनी एमालेसँग डराएका हुन्? यसै विषयमा रेडियो थाहासञ्चारका लागि दीपेन्द्र कुँवरले गरेको कुराकानी :
के भनेको यो ? अरु देशलाइ घृणा गर्नू कसरी राष्ट्रवाद हुन्छ ? डासाप देशभक्ति देशको परिधिभित्र रहेर गरिने देशप्रतिको समर्पण हो भने राष्ट्रवाद अन्तराष्ट्रिय परिधिमा गरिने देशप्रतिको समर्पण हो ।